ဘာ့ကြောင်း ဘုရားစီရင်သနည်း? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ဘာ့ကြောင်း ဘုရားစီရင်သနည်း?	December 10, 2009
Filed under: ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ — amayaphay @ 8:55 am
ဘုရားက မေတ္တာရှင်ဟုဆိုပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် သူဖန်ဆင်းထားသော လူသားများတို့ကို မီးနှင့်၎င်း၊ ရေနှင့်၎င်း၊ ရက်စက်စွာ စီရင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း?
၁. ဘုရားသည်ဖြောင့်မတ်သည့်အတွက် အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်ရှိသည်အလျှောက် မျက်နှာမလိုက်ဘဲစီရင်တော်မူသောတရားမင်းဖြစ်တော်မူ၏။
၂. ဘုရားသည် ကောင်းမြတ်သည့်အတွက် ကောင်းမြတ်သူကို ကောင်းမြတ်သည် အလျှောက် ဆုပေးတော်မူသော သစ္စာရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။
၃.ဘုရားသည်ကရုဏာရှင်ဖြစ်သည့်အတွက်မိမိအပြစ်မှ အမှန်တကယ် နောင်တရသူကို ခွင့်လွှတ်တော်မူတတ်သော မေတ္တာရှင်လည်းဖြစ်၏။
လူအများ ဘုရား၏အနှိုင်းမဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် မေတ္တာရှင်ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်နှစ်ချက်ကို မမှတ်ယူဘဲ အပြစ်ရှိသည် အလျောက် မျက်နှာမလိုက်ဘဲ စီရင်သောအချက်များတို့ကိုသာထောက်ပြကာ ဘုရားကို ရက်စက်သောဘုရားအဖြစ် ဝေဖန်တတ်ကြပါသည်။ ကျမ်းစာတွင် ဘုရားနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ထာဝရဘုရား (God သည် အပြစ်ရှိသူကိုလည်း မစီရင်၊ ကောင်းမြတ်သူကိုလည်း ဆုမပေးနိုင်၊ အပြစ်မှ နောင်တရသူကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်ခြင်းငှါ မစွမ်းသည့် အရှင်များ၊ ဘုရားများ (God) နှင့်တော့ မတူနိုင်ပါ။ (God) ကစီရင်ရာနေ့တွင် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်း သောလူတို့သတ်မှတ်သည် (Gods) တို့ကိုပါ တရားစီရင်လိမ့်မည့်အကြောင်းသမ္မာ ကျမ်းစာက ဆိုထားပါသည်။ (ဆာ ၈၂း၁)
One Response to “ဘာ့ကြောင်း ဘုရားစီရင်သနည်း?”
ဆင်ခြေသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ခိုးကြီးသည်ဆိုသော်လည်း အပြစ်ကိုမူ ပပျောက်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။
မနိုင်ဝန်ကိုထမ်းမိသောအခါမှ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မိမိအပြစ်အတွက် သက်သေကို သတ်ပစ်သော အပြစ်သားကဲ့သို့သာ ဖြစ်ပါသည်။ စိရင်ခြင်းကို သာတွေ့ရပြီး ဆုပေးခြင်းကားမတွေ့ရပါ။ မျက်နှာလည်း အလွန်လိုက်ပါသည်။ ငါ့လူမျိုး ငါ့ဘာသာ အလွန်အစွဲကြီးသော သူဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်းစာထဲက ဆုပေးခြင်း၊ ကောင်းချီးပေးခြင်းတို့သည် အတ်တကြီးကြောင်းကို ပြပါသည်။ လူတို့ မလိုက်လျှောက်နိုင်သော အချက်အလက်များဖြင့် လုပ်စားထားသော ဘုရားသာလျှင် ဖြစ်ပေတော့သည် တကား။